U-Alex Casademunt uzothola intela nozakwabo nabangane | Bezzia
USusana godoy | 11/05/2021 14:00 | Izindaba, Imicimbi
Izindaba ezibuhlungu ze ukufa kuka-Caslex Casademunt kwabanda wonke umuntu. Okungalindelekile futhi okubuhlungu, abangane bakhe bebekhona ukuzomnikeza ukuvalelisa kokugcina. Yize mhlawumbe bekungowokugcina ngoba manje kuza inkokhiso engokomzwelo nabalingani bakhe bakudala abavela e-'Operación Triunfo 'nabanye abaningi.
Ikhonsathi elihlose ukuba ngesinye sezikhathi ezikhetheke kakhulu onyakeni nenkumbulo engacimekiyo. Ngakho-ke, uma unentshisekelo yokuba yingxenye yawo, unemininingwane eminingi okufanele uyazi. Kubhale phansi kudayari yakho ukuze kungabikho lutho oluzokhohlwa okuzayo!
1 Isizukulwane sokuqala se-Operación Triunfo sijoyina futhi
2 Yibaphi abaculi abazobe bekhona ngesikhathi kuhlonishwa u-Caslex Casademunt
3 Ubani ozosingatha umcimbi
4 Kuzokwenzeka kuphi futhi nini
Isizukulwane sokuqala se-Operación Triunfo sijoyina futhi
Babeyisizukulwane sokuqala futhi lokho kuzohlala njalo kumaka izimpilo zabo. Ngoba bonke baziveze nephupho ebelizogqama emkhakheni wezomculo, babe nezingoma zabo, imisebenzi yabo yobungcweti futhi kube njalo kubo bonke. Kepha hhayi emkhakheni wobungcweti kuphela abagqamile kepha nakubasebenzi abajoyine ubungani obukhulu obuye baqhubeka kuyo yonke le minyaka. Ngakho-ke, abazange banqikaze ukuvalelisa ku-Alex Casademunt futhi manje, bazokwenza futhi.
Ukungabikho okukhulu? Iqiniso ukuthi akukaziwa ukuthi kuzoba khona ngempela noma cha. Ngoba vele siyazi ukuthi lolu hlobo lomcimbi lungasimangaza ngomzuzu wokugcina. Kepha okomzuzwana Kuthiwa uRosa noDavid Bisbal ngeke beze, kepha noGisela ngeke eze. Lesi sakamuva simemezele ukuthi ubenezinye izibophezelo zobungcweti nokuthi bekungeke kwenzeke ukuthi abekhona. Ngenkathi abangane bakhe ababili benokunye ukuzibophezela futhi kubonakala sengathi ngeke sibabone esiteji. Kepha lapho bebuzwa ngo-Alex, banamagama amnandi kuphela okuchaza lobo bungane obubaphawulele impilo.
Yibaphi abaculi abazobe bekhona ngesikhathi kuhlonishwa u-Caslex Casademunt
Ngaphandle kokungabaza, uDavid Bustamante akakwazanga ukuphuthelwa ukuqokwa. U-Alex ubenjengomfowabo kuye, yize abezindaba bebephawula ukuthi ngesizini edlule bebesekude kakhulu. Kepha akukho okunye okuyiqiniso njengoba umculi ephawule engxoxweni yakhe yokugcina. Eqinisweni, babenezinhlelo zobungcweti ndawonye, ​​ezazingenakwenziwa ngenxa yokushona kuka-Alex kungazelelwe. Ngaphezu kukaBustamante, uzophinde ahambisane noChenoa kanye noNuria Fergó noManu Tenorio. Ozakwabo bakudala be-'Open Formula ', uGeo, Javián noMireia bazophinde bangene esiteji.
Ngakolunye uhlangothi, asikwazi ukukhohlwa u-Alejandro Parreño, uVerónica Romero noma uNaim noNatalia. Ngaphandle kwabo bonke laba bangani, nabanye Amagama aqhamuka esigcawini sikazwelonke azwakala ngokuqinile enkokhweni efana noMarta Sánchez noma uMerche, kanye noPancho Céspedes noRosal. Ngaphandle kokukhohlwa ukuthi umfowabo ka-Caslex Casademunt, uJoan, naye uzobe ekhona. Ngokubambisana babeqophe iculo elaphuma ezinsukwini ezimbalwa ezedlule.
Ubani ozosingatha umcimbi
Yonke imicimbi yalolu hlobo inomethuli wayo. Indlela yokwenza izingeniso ezihamba phambili zezingoma nabaculi bebonke. Kepha kulokhu, bekufanele uthole umphathi wemikhosi naye obebambe iqhaza ngokuphelele ngokomzwelo. Ngakho-ke kuzoba nguNina, owayengumqondisi wesikhungo se-Operación Triunfo, naye osebenze ngokubambisana nabo bonke. Ngaphandle kokukhohlwa ukuthi futhi ungomunye wamazwi amakhulu esimo seSpain.
Kuzokwenzeka kuphi futhi nini
Umcimbi uzoba seWiZink CEnter eMadrid kanti usuku kuzoba ngoJulayi 24. Usuvele unawo amathikithi athengiswayo futhi amanani entengo ayahlukahluka, ngoba aqala kusuka kuma-euro angama-45 aze abe ngaphezu nje kwama-70. Ikhonsathi libizwa ngokuthi 'Elinye ithuba' ngoba libhekisela engomeni u-Caslex Casademunt ayeyiqophe nomfowabo. Ngaphezu kwalokho, ngesikhathi esinjengalesi kuyasiza ukukhokha intela ebikade ilindelwe.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Izindaba » U -lex Casademunt uthola inkokhiso yakhe ebilindelwe kakhulu
Ukwelula ngaphambi kokulala: yikuphi okukhonjiswe kakhulu?